” Lut: “le yovela unyamalale ungatsho nalapho uyakhona” Me: “oh sorry, bendirhalela ukubethwa ngu moya” Luya: “ungaphindi uyenze lonto ne” Me: “asoze” Athu: “khandiphe” Me: ‘hayi surhala” Lut: “I hope ayomali yam le ithenge ezonto” Me; “nope, yeyam” ndaya e roomini yam bendinga thandi ukuba phakathi kwabantu man, ndabeka eza zinto ndizi thengileyo phezu kwebhedi ndayo vula I curtain ndama ngase festileni ndajonga ngaphandle.
Bendicinga ngela phupha ndili phuphileyo,bendizi buza ukuba ndizo phupha igazi kude kube nini?
Ndathatha I ipad ndafaka I earphones ndamamela umculo (rnb) ndaphinda ndayoma ndase festileni, ndabuka I pics Ndeva ngomntu ondibamba esinqeni ibingu Siyabulela, wakhupha I earphones Siya: “uyaba khumbula ne” beku vele I pic ka Andile no Mazoe” Me: “yeah kakhulu” Him: “ugqibele nini ukuya emangcwabeni wabo?
Ugqiba kwam ndanxiba i sleepers, bendingayazi noba ngubani ixesha kodwa beku bonakala ukuba kuse mini ndaya e kitchen ndazenzela I cereal ndatya, ngoku ndityayo bendi cinga into eyenzeke kwi cellar last night ndiyakhumbula ndisela ndimamele umculo ndazama uphakama ndawa, uhmmm ndaphinda ndaphakama ne.kwawa I phone…oh shit ezinye andisazi khumbuli.
Ndaqhubeka ndatya ndisa dibanisa le puzzle.oh ndakhala ne, bendikhalela ntoni?